March 2021 | RatoTara.com Websoft University
मुख्य समाचार , राजनीत , शिक्षा
काठमाडौं प्रवेश गर्ने बिन्दूहरुमा एन्टीजेन परीक्षण गर्ने
काठमाण्डौ चैत १८ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा एन्टीजेन परीक्षण गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं प्रवेश गर्ने बिन्दूहरुमा एन्टीजेन परीक्षण गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई जिल्लाभित्र भेला, सभा जुलुसहरु रोक्नका लागि ताकेता सहितको निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ६२ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ९ सय १९ मा पिसिआर गर्दा १ सय ६२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या २ लाख ७७ हजार ३०९ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ५९ जना सङ्क्रमित सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुनेको संख्या दुई लाख ७२ हजार ७८६ पुगेको छ ।
बेलबारीमा २० गते देखी हातिपाइलेको औषधी खुवाइने
बेलबारी मोरङ चैत २० गते । रातो तारा डट कम, हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान बेलबारीमा यही चैत २० गतेदेखि सुरु गरिने भएको छ । ६६ हजार ५ सय लाई खुवाउने लक्ष्य राखिएको बेलबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सन्तोष विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार अभियानमा ६० जना स्वास्थ्यकर्मी र ३५ जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका परिचालन हुने छन । स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई भने टोल टोलमा गएर सुचना प्रबाहा गर्छन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख विश्वकर्माले भने खुवाउनका लागि भने घर घरमै स्वास्थ्यर्कीहरु पठाउने ब्यबस्था मिलाएका छौ । औषधी २ बर्षभन्दा मुनि,गर्भवति, र ७ दिनका सुत्केरी तथा ओछ्यान परेका सिकिस्त बिरामी बाहेकका अन्य जोसुकैलेपनि औषधी सेवन गर्न मिल्ने स्वास्थकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । औषधी सेवन गर्नका लागि नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले सबैलाई आग्रह गरेका छन ।
जिप दुर्घटनाबाट १ जना मृत्य, १ जना घाईते
पाँचथर, चैत्र-१८ गते । रातो तारा डट कम,पाँचथर याङबरक गाऊपालिका ३ ओयाम यलम्बर चौक स्थितमा भएको जिप दुर्घटनाबाट चालक फिदिम नगरपालिका २ पल्लोटार वस्ने ३६ बर्षीय फुल कुमार राईको मृत्यु भएको छ । बिहान ६ बजे फिदिमबाट च्याङथापु तर्फ जादै गरेको मे १ ज ३५६ नम्बरको जिप रोडबाट अन्दाजी २०० मिटर तल झरि दुर्घटना हुँदा गम्भिर घाईते भएका फुल कुमारको जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा उपचारको क्रममा पौने १० बजे मृत्यु भएको छ भने सोही गाडीमा सवार सोही स्थानका २२ बर्षीय आषिस राईको B&C अस्पताल बिर्मामोडमा उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
होलीको दिनमामा ६० सवारी साधन नियन्त्रणमा
बिराटनगर । रातो तारा डट कम, होली पर्वलाई मर्यादित र दुर्घटना रहित बनाउने उदेश्यले होली पर्वको शुरक्षा योजनाको निर्माण गरी बिभिन्न ११ ठाँउमा ट्राफिक सहितको चेकिङ र १९ठाँउमा प्रहरी पिकेट राखी हेल्मेट नलगाउने,तिनजना राखी चलाउने मा।प।से।गरी सवारी चलाउने र कागज पत्र साथमा नराखी सवारी चलाउने बिभिन्न ५९ मोटरसाईकल र एक ऋत् सफारीलाइ नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कार्वाही पश्चात छाडीएको,जसवाट ट्राफिक जरीवानाको लागी सिफारीस गर्दै रु।२१,५००।( ९एकाइस हजार पाँचसय०संकलन समेत भएकोछ ।
टेलिकमको तार चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा २ जना मानिस पक्राउ
सुनसरी । रातो तारा डट कम,जिल्ला सुनसरी इटहरी उमनपा वडा नम्बर ५ स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्गको खेती खोला पुलमा मिति २०७७।१२।०९ गते अं। ११स२० वजेको समयमा जि। सुनसरी ईटहरी ५ बस्ने बर्ष ३१ की ईश्वर लिम्बु र ऐ ऐ बस्ने बर्ष २४ की रेनुका राईले नेपाल टेलीकमबाट अण्डर ग्राउण्ड गरीएको १२०० एबष्च को केवल काट्दै गरेको अवस्थामा बन्चरो छेनो र हेक्सो ब्लेड सहित पक्राउ गरेको र यस अघी मिति २०७७।११।०३ गते रातीका दिन टेङ्ग्रा खोला पुलमा ६०० पेयरको १ थान ३०० पेयरको २ थान करिब २५ मिटर तार चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परी फेला पक्राउ गरी सुनसरी जिल्ला अदालतवाट म्याद थप अनुमती समेत लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ।
बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्न थाल्यो
काठमाण्डौ चैत १८ गते । रातो तारा डट कम,कोरोना भाइरस कोभिड १९ को प्रभावपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत्र देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या करिब ४ लाख ४४ हजार २ सय २७ जनाले घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५ लाख ४५ हजार १७ जनाले श्रम स्वीकृत लिएका थिए, यो वर्षको चैत्र सुरु सम्म एक लाख ७ सय ९० जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा महिला कामदारको सङ्ख्या ७ हजार ७ सय ६२ जना रहेको छ अनि पूरुष कामदार भने ९३ हजार २८ जना रहेका छन् ।
ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा, ५ लाख बराबरको क्षति
काठमाण्डौ चैत १८ गते । रातो तारा डट कम,रौतहटको कटहरिया गाउँपालिकामा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा एक घर जलेर नस्ट भएको छ । कटहरिया २ बडका बडेरवा स्थित राज किसोर साह सोनारको घरमा खाना पकाउने क्रममा ग्यास लिक भएर आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट साहको घर, तथा लता कपडा, अन्न गरि करिब ५ लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा चुल्हाई साह, अमरलाल साह लगायत ४ जना सामान्य घाइते भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका सई महानन्द कुर्मिले बताउनुभयो । घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघले विजयता खेलाडीहरुलाई जनहि एक एक लाख दिने भयो
काठमाण्डौ चैत १७ गते । रातो तारा डट कम,अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले तीन देशियकप अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही १ लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । एन्फाले आज विज्ञप्ति मार्फत उपाधि विजेता टोलीका सदस्यलाई जनही १÷१ लाख पुरस्कार दिने जानकारी गराएको हो । दशरथ रंगशालामा हिजो भएको फाइनलमा बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले पराजितगर्दै नेपालले उपाधिजितेको थियो ।
प्रतिबन्धित औषधी सहित ५ जना मानिस पक्राउ
बिराटनगर चैत १७ गते । रातो तारा डट कम, मोरङ मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका वडा नं.-७ स्थित मधुमल्ला बजारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय मधुमल्लाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला मोरङ मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका वडा नं.-७ बस्ने बर्ष २२ को लक्ष्मण भन्ने करण लिम्बु र ऐ. वडा नं.-७ बस्ने बर्ष २७ को सन्चामान सुब्बाको साथ बाट प्रतिबन्धित औषधी Tramadol ४४ पत्ता (440 चक्की), spaspain २४ पत्ता (२४० चक्की) र नाईट्रोजन २ पत्ता (३० चक्की) सहित दुबै जनालाई नियन्त्रणमा लिई ईप्रका उर्लाबारी ल्याई लागू औषध कसूरमा थप अनुसन्धान कार्य भई रहेकोछ । उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.-४ स्थित आईतबारे बजारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.-४ बस्ने बर्ष २७ को युबराज कटुवाल, ऐ. वडा नं.-४ बस्ने बर्ष २२ को कमल दाहाल र ऐ. वडा नं.-४ बस्ने बर्ष १९ को रन्जीत चौधरीको साथबाट प्रतिबन्धित औषधी Tramdol २० पत्ता (200 चक्की), spaspain २० पत्ता (२०० चक्की) सहित तिनै जना लाई नियन्त्रणमा लिई लागू औषध कसूरमा थप अनुसन्धान कार्य भईरहेकोछ ।
जंगली हात्तीको आक्रमणमा परी १ जनाको मृत्यु
मोरङ, चैत्र-१७ गते ।मोरङ मिक्लाजुङ गाऊपालिका ६ थामीझोडा बस्ने ५० बर्षीय याम बहादुर बोहोराको जंगली हात्तीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ । हिजो राती १० बजे छिमेकीको घरबाट टेलिभिजन हेरी घर फर्केन क्रममा जंगलबाट आएका ३ वटा जंगली हात्तीले किल्ची गम्भिर घाईते भएका बोहोराको उपचारको लागी लैजादै गर्दा रातको ११ बजे बाटैमा मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ ।
ट्रिफर दुर्घटनाबाट १ जना मृत्यु, २ जना घाईते
ताप्लेजुङ, चैत्र-१७ गते । ताप्लेजुङ पाथिभरा याङबरक गाऊपालिका ४ डुम्रिसे स्थित थुम्बेदिन डुम्रिसे सडक खण्डमा भएको ट्रिफर दुर्घटनाबाट १ जनाको मृत्यु र २ जना घाईते भएका छन् । सोमबार राती १० बजे प्रदेश ३-०१-०५ ख ९२७१ नम्बरको बालुवा लोड भएको ट्रिफर बाटो मोड्ने क्रममा अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी २०/२५ मिटर तल खसि दुर्घटना हुँदा ट्रिफर चालक सिन्धुली कमलमाई ४ बस्ने २४ बर्षीय याम कुमार बिक, सहचालक लमजुङ दोर्दि ६ किर्ती गाँउ बस्ने १८ बर्षीय कृष्ण बिक र ताप्लेजुङ पाथिभरा याङबरक २ थेचम्बु बस्ने २० बर्षीय मन्दिप लिम्बु घाईते भएका थिए । घाईते मध्ये कृष्ण बिकको उपचारको लागी जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङ ल्याउने क्रममा राती ११ बजे मृत्यु भएको थियो भने अन्य २ जना घाईतेको B&C अस्पताल बिर्तामोडमा उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।
वायु प्रदुषणको मात्रा एक्कासी बढेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट हुने आन्तरिक उडान ४० प्रतिशत प्रभावित हुदै,
काठमाण्डौ चैत १७ गते । रातो तारा डट कम,काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरका सहरमा वायु प्रदुषणको मात्रा एक्कासी बढेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट हुने आन्तरिक उडान ४० प्रतिशत प्रभावित भएको छ ।
जहाज सुरक्षित अवतरण हुन यान्त्रिक भिजिवलिटी १६ सय मिटर आवश्यक भए पनि गत शुक्रबारदेखि तुवाँलोले ढाकेपछि उडानहरू प्रभावित भएका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबहादुर तिवारीका अनुसार गत आइतबार १ सय ९ वटा उडानमध्ये ४१ वटा उडान रद्द भएका थिए भने शनिबार १ सय १५ उडानमध्ये ५० वटा उडान रद्द भएका थिए ।
तुवाँलोकै कारण अन्तराष्ट्रियभन्दा पनि आन्तरिक उडान प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ । जहाज उडान र अवतरणका लागि पाँच किलोमिटर र यान्त्रिक उडानका लागि १६ सय मिटर पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । तर दुई किलोमिटर र यान्त्रिक उडानका लागि पाँच सय मिटरसम्म पारदर्शिता कम भएको विमानस्थलले जनाएको छ । लामो समय सुख्खा भएको र पानी नपरी हावा नचलेपछि उपत्यकालगायतका मुख्य सहर धुम्म हुँदै आएको छ ।
शिक्षण संस्था ४ दिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाण्डौ चैत १६ गते । रातो तारा डट कम, शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको छ । लामो समयको खडेरीले हावा सुक्खा भएको र, हावाले पानी पार्ने बादलको साटो धूलो र धुवाँ लिएर आएको मौसमविदहरुले बताएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले मौसम प्रतिकूलताको कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । भोली देखि सबै शिक्षण सस्थाहरु शुक्रबार सम्म बन्द हुने छ ।
नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ९ सय ८० पुगे
काठमाण्डौ चैत १६ गते । रातो तारा डट कम,नेपालमा १ सय ४१ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनुसार आज थपिएका १४१ सङ्क्रमितसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ९ सय ८० पुगेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १ सय २२ पीसीआर परीक्षण भएका छन् । यस्तै, २४ घण्टामा ८२ जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् । हालसम्म २ लाख ७२ हजार ६ सय १२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार २७ पुगेको छ । त्यस्तै १ हजार ३ सय ४१ जना आइसोलेसनमा र ५६ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपालमा २२ लाख ६४ हजार २६८ पीसीआर परीक्षण भएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणका निर्णय र फायल मगाउने सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ चैत १६ गते । रातो तारा डट कम,सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मगाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको आज बसेको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा ती सम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत ती कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान दिएको कोरोनाविरुद्धको भेरासेल’ खोपको आठ लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो
काठमाडौ । रातो तारा डट कम, चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान दिएको कोरोनाविरुद्धको भेरासेल’ खोपको आठ लाख डोज खोप काठमाडौं ल्याइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स०को वाइडबडी जहाजबाट कोरोनाविरुद्धको खोप आज बिहान काठमाडौं झारेको हो । उक्त खोप चीन सरकारले गत माघ १८ गते नै नेपाललाई दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण चीन सरकारले दिने भनेको खोप ल्याउन झण्डै २ महिना लागेको हो ।
आजको फुटवल खेलमा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने
काठमाण्डौ चैत १६ गते । रातो तारा डट कम,त्रिदेशीय कप अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधिका लागि आज नेपाल र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने फाइनल खेल साँझ ५ः३० बजे सुरु हुनेछ । दुबै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिने छन् । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले फाइनलमा टिमको मुख्य लक्ष्य गोल गर्दै उपाधि जित्नु रहेको बताउनुभएको छ । फाइनल अघि हिजो भएको प्रि–म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले नेपालको मुख्य लक्ष्य भनेकै गोल गर्दै नतिजा निकाल्नु हुने बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा २ लाख ७६ हजार ८३९ जना सङ्क्रमितको संख्या पुग्यो
काठमाण्डौ चैत १५ गते । रातो तारा डट कम, पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालभर थप ८९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । २ हजार १ सय १ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप सङ्क्रमित फेला परेका हुन् । यसमध्ये अधिकांश सङ्क्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् । भक्तपुरमा ६, ललितपुरमा ७ र काठमाडौँमा ५२ जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । यही अवधिमा ९५ जना सङ्क्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । देशभर ५७ जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हालसम्म नेपालमा २ लाख ७६ हजार ८३९ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । यसमध्ये २ लाख ७२ हजार ५३० जना निको भएका छन् । यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार २७ जना रहेको छ ।
प्रदेश १ सभाको बैठक चैत २३ गते बोलाउने तय भयो
काठमाण्डौ चैत १५ गते । रातो तारा डट कम, पटक, पटक स्थगित हुँदै आएको प्रदेश १ सभाको बैठक चैत २३ गतेको लागि तय गरिएको छ । आज सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो २ बजेका लागि बैठक डाकेको हो । पछिल्लो पटक फागुन ९ मा प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि बोलाइएको फागुन २० र चैत २ गतेको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ । गएको बुधवार एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्तावमा तत्कालीन प्रचण्ड–माधव पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेका छन् । बैठकमा माधव पक्षका केही सांसद उपस्थित भएर अविश्वास प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए ।
ब्राउनसुगर सहित २ जना पक्राउ गर्यो
गाईघाट १५ चैत । प्रहरीले ४ ग्राम ब्राउनसुगर सहित २ जना लाई शनीबार राती पक्राउ गरेको छ । त्रियुगा नगरपालिका ११ बाबारानी मार्ग मा ठुलै परिमाणममा लागु औषधको कारोवार भैरहेको सुचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरु लाई पका्रउ गरेको हो । पका्रउ पर्नेमा गाईघाट वजारका ३२ वर्षिय दशरथ साह र २९ वर्षिय बिवश राई रहेकाछन । “गा्रहक लाई बिकी्र गर्न बसेको वेला उनीहरु लाई बा्रउन सुगर सहित पका्रउ गरीएको हो ”। एसपि भिम बहादुर दाहालले बताए । हामीले गा्रहक आउनु अगाडी नै उनीहरु लाई पका्रउ गर्यौ” । उनले भने । पका्रउ परेका दुबै जना लागु औषध कारोवारी भए पनि बिस्तृत रुपमा उनीहरु बारे अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
झापा, चैत्र १५ गते ।रातो तारा डट कम,
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-५ बाट नियन्त्रीत लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित २ जना पक्राउ परेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिर्तामोड नगरपालिका-५ का २५ बर्षीय दिपु चौधरी र बिर्तामोड नगरपालिका-३ का २५ बर्षीय सुवास ताजपुरियालाई १ ग्राम ८०० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित शनिवार अपरान्ह ५ बजे पक्राउ गरेको हो । लागुऔषध सहित पक्राउ परेका दुबै जनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धसान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले जनाएको छ ।
उदयपुर, चैत्र १५ गते । रातो तारा डट कम,
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-४ मा शनिवार राती ट्याक्टरले किचेर १ जनाको मृत्यु भएको छ । शनिवार राती पौने १० बजेको समयमा स्वर्गिय मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्गमा पुर्वबाट पश्चिम तर्फ आउदै गरेको स १ त ७६२० नम्बरको ट्याक्टरमा सवार रहेका चौदण्डीगढी नगरपालिका-२ का २८ बर्षीय रुपेश लामगादे अचानक ट्याक्टरबाट झर्दा उक्त ट्याक्टरको पछाडिको टायरले किचेर घाईते भएकोमा, घाईतेलाई बेल्टार अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारले जनाएको छ । घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको लोक कल्याणकारी, सूचना
फोटो समाचार , मुख्य समाचार
बाढी, पहिराको जोखिम भएको स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा बसोबास गरौँ । बाढी, पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकोले जथाभावी ढुंगागिट्टि, बालुवा उत्खनन गर्ने तथा बोट विरुवा काट्ने र खोलाको बहाव बढ्ने जस्ता कार्य नगरौँ ।
भारतमा कोरोना सङ्क्रमणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ६१ हजार ५ सय ८६ पुगे
काठमाण्डौ चैत १५ गते । रातो तारा डट कम,भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६२ हजार ६ सय ३१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । एकैदिन सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो सङ्ख्या भारतमा यो वर्षकै धेरै हो । यसअघि शनिबार यो वर्षकै दोस्रो धेरै ६२ हजार २ सय ९१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । पछिल्लो वृद्धिसँगै त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ करोड १९ लाख ७१ हजार ४ पुगेको छ । हालसम्म भारतमा १ करोड १३ लाख २१ हजार ५ सय ७८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । अब भारतमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४ लाख ८७ हजार ८ सय ४० छ । यस्तै भारतमा कोरोना सङ्क्रमणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ६१ हजार ५ सय ८६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा थप ३ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अधिकांश जङ्गलमा आगलागी हुदा नजिकका बस्तीहरुलाई ठुलै समस्य पर्दैछ ।
काठमाण्डौ चैत १५ गते । रातो तारा डट कम,सुख्खायामसँगै नुवाकोट र रसुवाका अधिकांश जङ्गलमा आगलागी भएको छ । कतिपय जङ्गलका आगो गाउँबस्ती नजिकै आएका कारण स्थानीयवासी त्रसित भएका छन् । हाल नुवाकोट र छिमेकी रसुवाको समेत गरी एकसय ५० भन्दा बढि जङ्गलमा आगलागी भएका छन् । धेरै स्थानमा एकै पटक आगलागी भएको र दमकललगायतका साधनहरुमा कमी भएका कारण नियन्त्रणमा समस्या भएकोछ । १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटका एकसय भन्दा बढि जङ्गलमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । प्राय सवैै स्थानीय तहका वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको कर्मचारीहरुले वताएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार डढेलो लागकेको क्षेत्रमा कर्मचारी तथा सामूदायिक वनका पदाधिकारी परिचालन गरिएका छन् । वन कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिकांश जङ्गलमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष डढेलोको घटना धेरै गुणाले बढेको छ । उहाँका अनुसार जिल्लामा हाल सामुदायिक वन ३ सय ७७ रहेका छन् भने निजी वन १५ र धार्मिक वन तीन वटा छन् । यसमध्ये हिजोसम्म एकसय भन्दा बढि सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ ।
होली मनाउँदा सर्तकता अपनाउन सरकारको आग्रह
काठमाण्डौ चैत १५ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले होली पर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन र भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका साहायक प्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले घरमा नै बसेर परिवारका साथमा होली मनानउन आग्रह गर्नुभयो । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले होली मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न पनि प्रहरीले विशेष अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र शान्तिसुरक्षा चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सीआईएनलाइ जानकारी दिनुभयो । भीडभाडमा पुगेर समूहगत रुपमा होली नमनाउन भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिदेशीय कप फुटबलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
काठमाण्डौ चैत १३ गते । रातो तारा डट कम,काठमाडौंमा जारी त्रिदेशीय कप अन्तराष्ट्रिय फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । प्रतिस्पर्धा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा साँझ साढे ५ बजेबाट सुरु हुने छ । प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न आजको खेलमा नेपाललाई कम्तिमा बराबरी आवश्यक छ । तर, बंगलादेशले २ गोल अन्तरमा जितेको अवस्थामा भने नेपालको फाइनल खेल्ने सम्भावना सकिनेछ । यसअघि त्रिदेशीय कपको पहिलो खेलमा बंगलादेशले किर्गिस्तानलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरिसकेको छ । दोस्रो खेलमा नेपाल र किर्गिस्तानले गोलरहित बराबरी खेलेपछि बंगलादेश त्रिदेशीय कपको फाइनलमा पुगिसकेको छ । प्रतियोगितामा नेपाल र बंगलादेशले सिनियर राष्ट्रिय टोलीलाई मैदानमा उतारेका छन् । तर किर्गिस्तानको भने २३ वर्षभन्दा मुनिको टोलीलाई सहभागी गराएको छ । फाइनल खेल सोमबार हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ ।